Hidhamaan siyaasaa eenyudha? - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Hidhamaan siyaasaa eenyu?
Gaggeessitoonni paartilee miseensa ADWUI afran torban darbe murtee xumura walga'ii koree hoji-raawwachiiftuu ilaalchisee ibsa kennanii ture.
Yeroos ministirri muummee Hayilemaariyaam Dassaaleny namoonni siyaasaafi kan biroon mana hidhaa jiran himanni isaanii addaan cite ykn dhiifamaan akka hiikaman murtaa'uu dubbatanii turan.
Boodarras hidhamtoota siyaasaa jedhamee miidiyaa irratti dubbatamuun isaa sirrii akka hin taaneefi Itoophiyaan hidhamtoota siyaasaa akka hin qabne beeksiseera mootummaan.
Kana waliin walqabatee eenyufaatu hiikamuu danda'a kan jedhurratti namoonni baayyeen yaada kennaniiru. Keessumaa 'hidhamtoonni siyaasaa eenyufaadha?' kan jedhu dhimma ijoo ture.
"Dhimma siyaasaa kan ta'e kamiifiyyuu mootummaan nama dhuunfaa tokko dirree siyaasaa keessa ala gochuudhaaf yaadee yoo himate, hidhe akkasumas yoo itti murtaa'e hidhamaa siyaasaa jedhama," jedhu Yunivaristii Kiilitti barsiisaa Seeraa kan ta'an Dr. Awwal Qaasim Aloo.
Ta'us garuu jecha hidhamtoota siyaasaa jedhuuf hiikni kennamu hedduudha kan jedhan Dr. Aloon yakka hojjetanii namoonni hidhaman akka hidhamtoota siyaasaatti fudhatamuu danda'u jedhu.
"Yakka raawwatanii ta'uu danda'a. Haa ta'u malee, dubbiin ijoo yakka sana raawwaachuu ykn raawwachuu dhabuu osoo hin taane; kan himatamaniifi kan itti murtaa'ee dhimmi siyaasaa waan jiruuf malee walitti bu'insi siyaasaa osoo hin jiru ta'ee yakkicha raawwatanii hidhamuu dhiisuu ni mala.
Kana waan ta'eef, qabamuu, hidhamuufi murtee isaanii waliin walqabatee hiikni ijoo ka'umsi siyaasaa akka jirudha," jechuun ibsu.
Akkasitti ibsuun kun garuu gama hundaan fudhatama hin qabu.
Hidhamtoota siyaasaa jechi jedhu kan wal nama falmisiisudha kan jedhan Aministii Internaashinaal kan Gaanfa Afrikaatti qorataa dhimmi mirga namoomaa Obbo Fissahaa Takilee, dhaabbanni isaanii "Jecha hidhamtoota siyaasaa jedhu fayyadamuu hin barbaadu," jedhu.
Hidhamaan siyaasaa waan baay'ee walitti qabata. Yakkawwan akka mootummaa fonqolchuu kan raawwatanis akka hidhamaa siyaasaatti lakkaa'amuu danda'u.
"Humnaan ykn karaa walfakkaatuun yaalii mootummaa fonqolchuu taasisaniin yoo hidhaman hidhamtoota siyaasaadha garuu yakka raawwataniitu.
Kanaaf waliin dhahuu akkasii kana hir'isuudhaaf hidhamtoota siyaasaa jechuurra hidhamtoota sababa yaada isaaniin hidhaman kan jedhu fayyadamna," jedhu.
Hidhamtoota sababa yaada isaaniin hidhaman (prisoners of thought) kan jedhu namoonni sababii ejjennoo qabaniif ykn ilaalcha siyaasaa qabaniif hidhamuu isaanii agarsiisa.
Amnastii Internaashinaal hidhamtoota sababa yaada isaaniin hidhaman kan jechuudhaaf yakka itti maxxanfame osoo hin taane ka'umsa isaa ilaala kan jedhu obbo Fissahaan.
"Safartuun keenya tokkoffaa kan ta'uu qabu namni tokko dhuguma kana raawwateeraamoo nama kana dhaabbata mootummaa jiruun hojii isaa/isheerraa gufachiisuuf yakka hojjeteera jedhame maqaa itti bahedha kan jedhu ilaaluu barbaachisa. Ka'umsa isaa qulqulleeffachuun salphaa miti garuu salphaatti kan hubachuu dandeenyudha.''
''Yakki raawwataniiru inni jedhame yakkadhaa? Dabalataanis dhimmi jedhame seerota addunyaa kan bu'uura godhatedha kan jedhus ni ilaalama,'' jedhaniiru.
Dura taa'aa itti-aanaa fi itti gaafatamaan dhimma alaa dhaaba siyaasaa Madirak Dr. Bayyanee Phexiroos gama isaaniitiin "kallatiidhaan hirmaannaa siyaasaatiin ifatti kan uummanni beeku , akka labsii siyaasaa Itoophiyaatti paartii siyaasaa hundeessanii kan gaggeessan, gaggeessitoonni kun tarree duraarratti eeramu.
Achiin booda ammoo namoonni isaan jalatti hojjetan miseensonni gara gadii jiran, gaggeessitoota isaanii akkasuma hidhamtoota siyaasaa jedhamu," jedhu.
Karaa kallattii alaanis paartiiwwan siyaasaaf maallaqaanis ta'e yaadaan akkasumas karaa biraatiin deggarsa kennitaniittu jedhamuun lammiileen hidhaman jiru kan jedhan Dr. Bayyanee "biyya aalaa keessaa warra socho'an warren sirnichi goolii uumtota jedhee maqaa itti baase waliin walitti dhufeenya qabdu jedhamuun kan hidhaman hidhamtoota siyaasaati," jedhaniiru.
Akka Dr. Awwalitti hidhamtoonni siyaasaa eenyufaadha kan jedhu kan murteessu mootummaadha. "Kan hidhus kan hiikus isa waan ta'eef ramaddii sana keessa kan oolan kan murteessu isaanumadha," jedhu.
Ibsa mootummaatti aanee kan namoota hedduu akka irratti dubbatan gochaa jirus eenyufaatu akka hiikamu beekuu dhabuudha. Kanaaf, akka murtee mootummaan kennutti kan hiikamaniifi kan mana hidhaa turan jiraachuu danda'u.
Maatiin namoota hidhaa jiranii namni eegnu hin hiikamne jedhan